Peter Arvai Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Peter Arvai
Peter waa maamulaha guud ee Prezi, softiweerka soo-bandhigga is-dhexgalka ah, ee uu isku xiray sanadkii 2008 Adam Somlai-Fischer iyo Péter Halácsy, oo ah naqshadeeye iyo hal-abuure, taasoo macnaheedu yahay sidii loo abuuri lahaa hab xusuus iyo xiiso badan leh oo dadku ku wadaagaan sheekooyinka. Kahor wada aasaasida Prezi, Peter wuxuu aasaasay omvard.se, oo ah shirkad uruurisa xogta natiijooyinka daaweynta bukaanada isbitaalada, iyo waliba soo saarida akhriste war bixiyaha ugu horeeya aduunka si dadku ugala socdaan TED Talks aaladooda moobaylka.
Suuqleyda ayaa sifiican uga yaqaana qofkasta muhiimadda ay leedahay wada xiriirka wax ku oolka ah. Dadaal kasta oo suuq-geyn ah, ujeeddadu waa inaad farriin ugu dirto dhagaystayaashaada qaab iyaga ka qayb qaadanaya, oo maskaxda ku haysa, kana dhaadhicinaysa inay ficil qaadaan-isla sidaas oo kale ayay run u tahay nooc kasta oo bandhig ah. Haddii aad u dhisi lahayd sagxad kooxdaada iibka ah, weydiisashada miisaaniyad maamulka sare, ama aad horumarineyso nuxur dhisme astaan ​​u ah shir weyne, waxaad u baahan tahay